राष्ट्रिय झण्डा जलाउँदै गरेको भिडियो आएपछि तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग (भिडियोसहित)
August 18, 2020 661
सामाजिक सञ्जाल अहिले स’बैको पहुचमा छ । त्यहाँ राखि’एका हरेक कुरा एकै छिनमा भाइरल हुन्छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विकृत मानसिकता पनि प्रस्तुत हुन थालेको छ । अति विरो_ध गर्ने प्रवित्ती सामा’जिक सञ्जालमा देखिएको छ । अहिले एउटा भि_डियो भाइरल भइरहेको छ । जसमा नेपालको राष्ट्रियता एवंं जातीय सद्भावविरुद्ध घृणा फैलाउने काम गरिएको छ ।
भिडियोमा राष्ट्रियता वि’रुद्धका शब्द राखेर गीत सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालको झण्डा जलाइएको देखिन्छ । त्यो गीत सार्वजनिक भए लगत्तै अहिले वि’रोध सुरु भएको छ । गीतमा राखि’एका शब्द राष्ट्रियता विरुद्ध छन् । गतिविधि पनि त्यस्तै देख्न्छ ।
बाहुन क्षे”त्रलाई गा’ली गरिएको र राष्ट्रि’य झण्डा समेत जलाइएको यो दृष्यले सामाजिक सद्भाग र राष्ट्रियता विरुद्धको भाव ओकलेको छ । यो गीतलाई प्रतिब’न्धित गरी यसमा संलग्न व्यक्ति’हरुलाई कारबाही गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले माग गरेका छन् ।
‘देशद्रोही’ शीर्षकको उक्त गीत ‘मंगोल हप अफिसियल’ नामक च्यानलबाट सोमबार अपलोड भए लगत्तै भाइरल भएको हो । गीतमा राखिएका शब्द समा’चारमा प्रयोग गर्न र राख्न समेत नमिल्ने खा’लमा छन् । र्‍याप जनरामा गाइएको गीतको लि’रिक्स र्‍यापरका रुपमा मंगोल ग्याल्ज ली एन्ड एटीएम उल्लेख छ । युवक र युव’तीहरु भिडियोमा देखिन्छन् ।
युट्युवमा हालेलगत्तै भि’डियो भाइ’रल भएको छ । निकै कडा आलोचना भएको छ । तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग’कर्ताले माग राखेका छन् । सबैले यस गीत’माथि तत्काल एक्सन लिन प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् ।
मकवानपुर जिल्ला’को बाग्मती गाउँपालि’कास्थित श्री विष्णु आधारभूत विद्यालयको प्रांगणमा गीतको सुटिङ गरिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । राप्रपा सांसद रा’जेन्द्र लिङदेनले ट्विटरमा ले’खेका छन्,
‘जातीय घृणा फैलाउने र राष्ट्रिय झण्डा जलाउने कार्य कुनै पनि अर्थमा र कदापि स्वीकार्य हुँदैन । यसप्रका’रको विष वृक्ष उमार्ने र मलजल गर्ने काम कसैले नगरौं ।’
Prevसुशान्तसिंह राजपुत र उनकी पूर्व म्या’नेजर दिशाको मृ’त्युमा भेटियो यस्तो कनेक्सन !
Nextसुभद्राको निध’न भएको १ वर्ष: एलिजाले बल्ल पाईन् खबर, यस्तो स्ट्याटस लेखेर गरिन् डिलेट
हरेक दिन बीच सडक हुँदै घोडा चढेर स्कूल जान्छिन् यी विद्यार्थी (भिडियो सहित)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ : थाहा पाहुनु/होस्
‘यस्तो अन्तरवार्ता कसैले लिएको थिएन” भन्दै साम्राज्ञी अन्तरवार्तामै धर’धरी रोइन् (भिडियोसहित)
अनौठो प्रेम ! श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान’को उनकी गर्लफ्रेण्ड’सँग विवाह गराइ’दिइन्…
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132957)